Free fanompoana an-tserasera. Calculator fittings
Ny savaivony ny miditra tsimoramora, mm
Ny halavan'ny anilan'ny tsorakazo, metatra
Price isaky ny taonina
Calculator fanamafisana 2
Total lanja valves, kg
Ny vola lany isan-taonina
Kajy ny fanamafisana
Manao kajy ny tontalin'ny lanjan'ny fanamafisana, ny boky ankapobeny sy ny vesatry ny iray metatra ny rebar.
Avy ny fantatra sy ny faharetan'ny savaivony fanamafisana.
Calculator fittings 2
Manao kajy ny halavan'ny tanteraka fanamafisana, ny votoatiny sy ny isan'ny rebars, ny vesatry ny iray metatra sy tehina iray.
Avy ny fantatra savaivony sy ny lanjan'ny tanteraka ny miditra tsimoramora.
Ny kajy dia mifototra amin'ny lanja ny iray metatra toratelo vy 7850 kg.
Kajy ny armature ho an'ny fanorenana trano
Rehefa trano no tena zava-dehibe ny manao kajy ny habetsaky ny fanamafisana ny fototra. Mba manao izany ianao, dia hanampy ny fandaharana. Ny fampiasana ny fanaovana kajy valves mety ho, mahafantatra ny lanjan'ny sy ny halavan'ny tehina hahafantatra ny tontalin'ny lanjany ilainao fanamafisana, na ny isan'ny hazo takiana sy ny ankapobeny halavany. Ireo antontan-kevitra dia hanampy ho haingana ary mora manao kajy ny habetsahan'ny fanamafisana takiana mba hanatanteraka ny asa.
Kajy ny fittings ho an'ny isan-karazany ny fanorenana
Ny kajy dia tsy maintsy ihany koa ny armature mahalala ny karazana fototra sy ny trano. Eto, dia misy roa iombonana Fijerena. Izany slab dia esory fototra.
Fittings ny slab fototra
Slab fototra no ampiasaina izay miantoraka mahavokatra amin'ny tokony hametraka trano be vita amin'ny biriky simenitra na amin'ny lehibe faobe valindrihana azo tsapain-tànana. Amin'ity tranga ity dia mitaky ny fototra fanamafisana. Izany no natao tamin'ny roa toko, ny tsirairay izay ahitana hazo roa sosona ny fandaharana perpendicular ny tsirairay.
Raiso ny ohatry ny kajy ny fanamafisana ny slabs, halavan'ny lafiny 5 metatra. Manamafy tehina dia apetraka lavidavitra ny 20 sm tamin'izy samy izy. Noho izany, amin'ny lafiny iray ny 25 tehina takiana. Amin'ny sisin'ny ny lovia trano fisotroana tsy napetraka, dia ny sisa tavela 23.
Ankehitriny, satria fantatsika ny isan'ny hazo, ny halavany azo kajy. Tsara homarihina fa ny hazo valves tsy mahatratra ny sisin'ny 20 sm, ary, noho izany, mifototra amin'ny lavan'ny ny lovia, ny halavan'ny tsorakazo tsirairay ho 460 cm. Transverse sosona ambany ny toe-javatra izay ny lovia manana endrika tora-droa no ho toy izany koa. Koa, dia tsy maintsy manao kajy ny habetsahan'ny fanamafisana takiana mba hampifandray faritra roa ireo.
Mieritreritra fa ny elanelana misy eo amin'ny fehikibo 23 cm. Amin'ity tranga ity rohy iray eo izy ireo dia hanana ny halavany 25 cm, satria roa santimetatra miala amin'ny fixture. Webs toy izany amin'ity tranga ity dia 23 isa, satria natao tao an-trano teo amin'ny sampanan-dalana ny tsirairay fehikibo fanamafisana. Raha ireo antontan-kevitra, dia afaka miroso amin ny kajy mampiasa ny fandaharana.
Fittings ny hanaisotra amin 'ny fototra
Strip fototra no ampiasaina izay dia tsy marin-toerana loatra tany heverina fa hanorina trano mavesatra. No fototry ny toy izany ny horonam-peo na hamafisina mivaingana azo tsapain-tànana, izay mivelatra eny amin'ny faritra manodidina rehetra ny trano sy eo ambanin'ny loha entana-nitondra rindrina. Fanamafisana ny fototry novokarina koa ao amin'ny 2 faritra, fa noho ny antsipiriany ny amin'ny esory fanamafisana izany fototra mandevona kely be, ary, noho izany, dia tsy lany.
Teny fisehon'ny fanamafisana momba mitovy ny slab fototra. Tehina ihany no Tokony ho faranana amin'ny 30-40 sm avy eo amin'ny zorony. Ary tokony jumper tsirairay amin'ny 2-4 sm mpiaro ny ny tsorakazo izay mitoetra. Kajy ny mitsangana jumpers atao eo koa io toro lalana tahaka ny kajy ny halavan'ny ilaina slab fanamafisana ny fototra.
Mariho fa ao amin'ny roa voalohany sy ny toe-javatra faharoa dia tsy maintsy ho raisina valves amin'ny sisiny ny 2,5 isan-jato, fara fahakeliny.